नेपालकै पहिलो डिजिटल शौचालय : सङ्गीत सुन्दै शौच ! — Bhaktapurpost.com
नेपालकै पहिलो डिजिटल शौचालय : सङ्गीत सुन्दै शौच !
भक्तपुर, ७ माघ
तपाईँ नेपालगञ्जवासी हुनुहुन्छ या यहाँको पाहुना। यदि तपाईँ नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ भने अब शौचसँगै सङ्गीतको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यसका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालकै पहिलो अत्याधुनिक डिजिटल शौचालय सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सो शौचालयको जमिनमाथि निर्माण गरिएको संरचना फोल्डिङयुक्त छ। शौचालय भरिएमा नटबोल्ट खोलेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै लान सकिनेछ। डिजिटल शौचालयमा सौर्य प्रणालीबाट विद्युत् प्रवाह गरिएको छ। अपाङ्गता तथा महिलामैत्री छ। एकैपटक तीन महिला, तीन पुरुष र एक फरक क्षमताका व्यक्तिले शौच गर्न सक्नेछन्।
पूर्ण स्वचालित पद्धतिमा चल्ने शौचालयभित्र पानी तथा साबुन भएन भने शौचालयको ढोका खुल्दैन। शौचालय प्रयोगमा आए-नआएको जानकारी ढोकामा रहेको डिजिटल डिस्प्लेमा सहजै देख्न सकिन्छ। शौचालयभित्र शौच गर्दा स्वचालितरूपमा सङ्गीत बज्छ। जो–कोहीले सङ्गीत सुन्दै शौच गर्न पाउनेछन्। शौच गरिसकेपछि शौचालयभित्रै हात धुन पानी र साबुन छ, जुन स्वचालित छ।
साबुन सङ्केत रहेको तल हात लगेका तरल अवस्थाको साबुन हातमा झर्छ, सँगै रहेको पानी सङ्केत देखाएको तल हात लग्दा पानी झर्छ। नेपालगञ्जको केन्द्र धम्बोझीचोक नजिक कृषि विकास बैंक र राष्ट्र बैंकको बीचमा सो डिजिटल शौचालय निर्माण गरिएको छ।
एकैपटक सात जनाले प्रयोग गर्न मिल्ने आधुनिक प्रविधिसहितको शौचालय प्रयोगका लागि सीमित अवधिसम्म निःशुल्क गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा धवलशम्शेर राणाले स्वचालित शौचालय सञ्चालनमा आउनुमात्रै उपलब्धि नभएकाले यसको सही सुदपयोगमा जोड दिने बताएका छन्।
उनले शौचालयलाई सफा राख्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य भएको भन्दै सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वातावरण इञ्जिनियर प्रकाश डिसीका अनुसार एसएनभी नेदरल्याण्ड्स विकास कोषले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य र विकासका लागि नगर सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गत रु ४६ लाख ३६ हजारको लागतमा स्वचालित शौचालय निर्माण गरिएको हो।
नेदरल्याण्ड्स विकास नियोगले यसअघि नै चार बाहिनीचोक र मासुमण्डी नजिक रु ८१ लाख १६ हजार लागतमा दुई सुलभ शौचालय निर्माण गरी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। योसँगै नेपालगञ्ज बजारभित्र एक दर्जन सार्वजनिक शौचालय पुगेका छन्। त्यसमा पछिल्लोपटक बनेका शौचालय अत्याधुनिक छन्।
बजारमा निस्किने यात्रु र पसलेलाई समेत दिसा, पिसाब लाग्दा समस्या हुने गरेको भन्दै गुनासो बढिरहेका बेला नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक शौचालय बनिरहेका छन्। शौचालय सञ्चालनमा आएसँगै यसलाई उपमहानगरपालिकाले आफैं सञ्चालन गर्ने वा ठेक्कामा दिने भन्नेबारे निर्णय भइनसकेको वातावरण इञ्जिनीयर डिसीले बताए। यसअघि उपमहानगरपालिकाले तीन घुम्ती शौचालय सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यि हुन् मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ८ निर्णय
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ८ वटा निर्णयहरु गरेको छ ।...
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्...
माधव नेपाल र प्रचण्डबीच भेटवार्ता
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कोटेश्वर पुगेका...
अनलाइन शिक्षणसम्बन्धी तालिम माग गरेमा विद्यालयलाई सोझै दिने सरकारी तयारी
– १० लाख ९३ हजार बालबालिका अनलाइन कक्षामा – इच्छाशक्ति भएका सामुदायिक विद्यालयहरुले अनलाइनबाटै...
भूवन र दीपाश्रीको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा हल्ला मात्रै !
सर्वाधिक ग्रस कमाई गर्न सफल चलचित्र ‘छक्का पन्जा’का ३ वटै सिरिजका कारण निर्देशक दीपाश्री निरौला...
एमाले भक्तपुरद्वारा स्थानीय तहमा पार्टीको नेता चयन, असन्तुष्टद्वारा राजिनामा
कलाकार किरण केसीको भन्दै कब्जा गरिएको जग्गा उनको नभएको पुष्टि
म्याद गुज्रेका सामानहरुमा नँया मिति राखी बिक्री बितरण गर्नेहरु पक्राउ